कथाः उत्ताउली केटी
‘हेर्दाहेर्दै तिम्रो तस्वीर बोल्यो अनि रोएँ, अतीतका ती यादहरुले पोल्यो अनि रोएँ ।’
मोबाइल चलाउँदै थियो, खै के थिचियो कुन्नि, अचानकै अञ्जु पन्तको गीत बज्न थाल्यो । यसै पनि तनावमा थियो ऊ । अफिसमा एउटा क्लाइन्टसँग राम्रै विवाद भएको थियो । पुरानो सम्झौतामा नयाँ बजार मूल्य कायम हुनुपर्ने अडान लिएपछि उसको पारो चढयो ।
‘डिल क्यान्सिल गरौं’ तत्काल केही फरक पर्दैन । तर, दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । ‘स्वीकार गरौं’ सम्झौता विपरीत थिए अडान उसका । मस्तिष्कमा दिनभरका घटनाले कुस्ती खेलिरहँदा निद्रा नलाग्नु स्वाभाविक थियो । टाउको गह्रौं भइरहृयो । सायद निकै छटपटी पनि थियो मनभित्र कताकता ।
बीसौं वर्षको व्यावसायिक अनुभवमा यस्तो कहिल्यै भएन उसलाई । कुनै पनि निर्णय लिन समय नै लिँदैनथ्यो । जे आइपर्छ, मनलाई सोध्थ्यो र तुरन्तै निर्णय गथ्र्यो । केही निर्णयले व्यवसाय र उसलाई प्रतिकूल प्रभाव पारे पनि त्यसभित्र पनि अनुकूलता खोज्न माहिर थियो ऊ । आफैंले आफ्नालागि गरेका निर्णय कहिल्यै गलत हुँदैनन् भन्ने थियो उसलाई ।
बेला बेला मनमनै गम्थ्यो– किन कि यो मेरो निर्णय हो ! झण्डै १२ बजेको हुँदो हो । परिवारका सबै सदस्य मस्त निद्रामा थिए । ऊ भने बिथोलिएको थियो नराम्रोसँग । आज अलि ढिलो पनि भयो घर आउन । ‘सधैंको बिजनेस, डेली भेटघाट, मिटिङ, अपोइन्टमेन्ट मनै नभएपछि बहाना नाथेको के कमी ? जति पनि हुन्छन् । समय घर्किएपछि फिरेको बुद्धिको के काम ? जीवन आफ्नालागि मात्रै होइन ! एक्लै रमाउने मान्छे जोगी हुनु नि, किन गृहस्थी प्रवेश गरेको ?’ संघारमै पड्किएकी थिई श्रीमती । ‘आज छोरीको बर्थ डे । उसका साथीहरु आएका थिए । कम्तिमा मेरो नभए पनि बच्चाहरुको त ख्याल गर्नु नि ।’
यस्तै यस्तै कैयौं कुराहरु फकालिरही । ऊ सुनी मात्र रहृयो । सन्दर्भ के थियो ? गुनासो के बाँकी रह्यो ? मेसै पाएन । ऊ हतपत जवाफ फर्काउँदैन यसै पनि । आफैं तनावमा भएका बेला बोल्दै बोेल्दैन । ‘हेर्दाहेर्दै तिम्रो तस्वीर बोल्यो अनि रोएँ, अतीतका ती यादहरुले पोल्यो अनि रोएँ । अञ्जु पन्त गुन्जिरहिन् एकनाससँग । पहिलो पटक सङ्गीतले थोरै आनन्द दियो उसलाई । दोस्रो पटक सुन्यो । शब्द र भावले मस्त बनायो । तेस्रोपटक सुन्दा स्तब्ध भयो । विस्मृत जस्तै भएका सम्झनाका छालहरु उछालिएर आए । ‘आफ्नालागि जिऊ ! मनलाई पनि कहिलेकाहीँ खुसी राख । तिम्रो जीवन खै ? तिम्रो खुसी खै ?’ त्यस दिन उसले भनेकी थिई ।
‘जीवन आफ्नालागि मात्रै होइन ।’ श्रीमतीको आवाज पनि गुन्जियो एकसाथ मस्तिष्कमा । ‘तिम्रो खुसी खै ? तिम्रो मनको चाहना बुझेका छौ ? यत्तिका काम केका लागि ? कहिलेकाहीँ मनको चाहना पनि बुझ्ने गर । आफ्नालागि पनि जिउने गर । त्यसले जीवनलाई स्वादिलो बनाउँछ ।’ थपेकी थिई उसले । ऊ, उत्तरा अर्थात् उत्ताउली केटी । ‘इज दिस एप्रोप्रिट फर हर ?’ काउकुती शैलीमा मुस्कुरायो । पहिलो भेटमा सालिन लागे पनि दोस्रो भेटदेखि उसलाई त्यो केटी खासै मन परेको थिएन । त्यही दिन उसको मनले भन्यो–उत्ताउली केटी !
‘जीवनमा समय छ ?’ व्यस्त कार्यक्रम तालिकाबीचमा पाएको थोरै समयमा साथीहरुमाझ उसले यो प्रश्न फ्याँकेको थियो । ‘लभ गर्ने समय छ ?’ अनपेक्षित थियो उत्तरमा उत्तराको प्रश्न उसका लागि । उसले त्यति बेलै सोचेको थियो( कति उत्ताउली रैछे यो । कामको सिलसिलामा दोस्रो भेट थियो ऊसँग । प्रश्न अरु कसैलाई सोधिएको थियो । जबाफमा उत्तराले प्रश्न गरी । आफ्नो अकमक्कतामा उत्तरा भित्रभित्रै मुस्कुराएको महसुस ग¥यो उसले । सोच्यो–प्रश्नको ठूलै बल्छी थापेको ठानी होली । वरपर उभिएका उसका मान्यवर, आरणीय, साथीभाइ, अनि थियो भने विशेष कोही । सबैले मुखामुख गरे तर आँट कसैले गरेनन् मुख खोल्ने ।
ऊ सोचिरहेको थियो, छ भनूँ कि छैन भनूँ ? छ भनुँ, यो उमेरमा पनि लभ गर्दै हिँड्दो रैछ भन्छन् कि भन्ने डर । छैन भनुँ कस्तो निष्प्रिह जीवन रैछ पारिवारिक बोझले थिचिएको । माया, प्रेम, स्नेहबिनाको जीवन मरूभूमितुल्य भन्ने होलान् भन्ने पिर उत्तिकै । प्रश्न अनपेक्षित त छँदै थियो । जीवनको भित्री पाटो पनि खोतल्ने भएपछि थप गम्भीर बनायो । पुरूष मनोदशाको विश्लेषण गर्दै उत्तरा मक्ख परी । सहज र सरल उसको व्यक्तित्वलाई जटिल मोडमा र्पुयाएकोमा भित्रभित्रै गद्गद पनि थिई सायद !
‘अँ, छ ।’ बडो संवेदनशील, गम्भीर अनि सतर्कतासाथ उसले भन्यो ।
‘ओ ! यस‘ । उसो भए जीवन खुसी र सुखी छ ।’ २–४ जना मान्छे पन्छाउँदै उत्तरा ऊ नजिक पुगी । ऊ सत्य बोलिरहेछ भन्ने विश्वास गरिन उत्तराले । सांसारिक मायाजालको जिम्मेवारी र दायित्वबोधको थकान मात्र देखी उसले उसको अनुहारमा ।
ऊ यति थकित थियो कि भोकले व्याकुल अजिंगरले आफ्नै अगाडि आहारा आउँदा पनि मुख बाउन अल्छी माने जस्तै । पारिवारिक जिम्मेवारी अनि दायित्वबोधले थिचिएको उसको जीवन मेसिन हो कि मेसिन जीवन ? ठम्याउन सकेको थिएन । ऊ कहिले जीवनलाई मेसिन ठान्थ्यो, कहिले मेसिनलाई जीवन । मेसिनलाई सधैं अन गरिरहन्थ्यो ऊ–कुनै पनि बेला मेसिन अफ भयो भने जीवन सकियो । सायद जीवनप्रतिको बुझाइ त्यही थियो उसको । ‘काम’.., सिर्फ मामका लागि ।’ ऊप्रतिको उत्तराको बुझाइ । ‘फेरि पनि समय व्यवस्थापन आफैंमा कठिन त छ नि !’ उत्तराको आशंकालाई उसैले पुष्टि र्गयो । ‘अँधेरी रात मेरै हो । दिन अरुका लागि, रात आफ्नालागि । समयको सही व्यवस्थापन ।’ उत्तरा छाती फुलाउँदै निर्धक्क बोली ।
अचानकै सन्नाटा छायो । निस्पट्ट अँध्यारोमा पनि मान्छेले आफूलाई चाहिँ देख्छ । सायद अचानकै सूर्य डुब्यो । तुरन्तै अध्याँरो भयो । अनि दुवैले आफैंलाई मात्रै देखिरहेका छन् त्यो अँध्यारोमा । निर्धक्क फुकेको उत्तराको छाती क्षणभरमै खुम्चियो नमस्ते झार जस्तै । सानी छँदा खरबारीमा घाँस काटेको सम्झी । घाँस काट्तै गर्दा बेला बेला मेसो छोडेर नमस्ते झार छुन जान्थी । उसै पनि मसिना पात ।
त्यसको कुनै टुप्पोमा छुनेवित्तिकै फिँजारिएका पात सबै खुम्चिन्थे । ऊ ठान्थी( झारले आफैलाई नमस्ते गरेको । सायद मपाइँत्व बोकेका सबै मान्छे यस्तै ठान्थे( झार हामीलाई नमस्ते गरिरहेछ । गजबको सन्तुष्टि, अनौठो आनन्द ।
झारले नमस्ते गरेको भ्रममा त्यस बेला ओठमा मुस्कान सवार भएथ्यो । अहिले मुस्कान हरायो क्षणभरमै । ओठ, मुख सुक्यो, स्वाभिमान डग्मगायो । आत्मविश्वास अल्झियो आफैले असावधानीपूर्वक थापेको बल्छीमा । भयभीत मनले रात्रिकालीन ठमेल सम्झियो । त्यहाँका सुन्दरी सम्झियो । ओ माइ गड ! थाइल्यान्डसम्म पुग्यो मन । पसिनाको खोलै बग्यो । गलत स्थान, गलत अभिव्यक्ति । यति अपरिपक्व यसअगि कहिल्यै थिइन उत्तरा ।
‘बिहेपछि त समय व्यवस्थापन गाह्रै होला’, गम्भीर हुँदै भन्यो उसले । विचलित हुनबाट बँच्यो उत्तराको स्वाभिमानसँगै आत्मविश्वास । भयभीत मन मात्रै पुगेको रहेछ ठमेल । आलाकाँचा व्यक्तित्वको अपरिपक्व सोच मात्रै पुगेको रहेछ थाइल्याण्ड । उसको अभिव्यक्तिले ठूलै राहत दियो उत्तरालाई । बलियो भएको उत्तराको स्वाभिमानले सायद फेरि उसको मनलाई जिस्क्यायो । ‘श्रीमतीलाई धेरै समय दिँदो रहेछ ? श्रीमतीले पनि त धेरै समय मागेको हुनुपर्छ । उसलाई धेरै समय दिनुपरेकाले काममा समय व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको ? हुनै सक्तैन । काम त उसको प्राथमिकता हो । मेसिन जसरी काममा खटिन्छ । उसले जसरी कामलाई सबैले प्राथमिकता दिने हो भने नेपालको आर्थिक विकासको गति सतप्रतिशत बढ्छ । श्रीमतीलाई समय दिन नसकेकाले गुनासो सुन्नुपर्दा ऊ भित्रभित्रै खुम्चिएको छ । मरिच जस्तै । होइन, होइन, नमस्ते झार जस्तै ।’ उत्तराभित्र हाँसोको फोहोरा नै छुटयो होला भन्ने ठान्यो उसले ।
‘त्यही त, सन्तुलन मिलाउन जान्नुर्पयो भनेको नि ।’ समय व्यवस्थापनसँगै उत्तरा सम्बन्ध व्यवस्थापनको प्रशिक्षणमा लागि । ‘बिहेपछि त समय आफ्ना लागि भन्ने नै रहेन नि । श्रीमती, छोराछोरी, ससुराली, इष्टमित्र, बन्धुबान्धव, अनि व्यवसाय‘ सकियो जीवन । सकियो समय । कहाँ छ जीवनमा समय ?’ पत्तै नपाइ उसले जीवनप्रतिको सारा असन्तुष्टि र दिग्दारी पोखिसकेको थियो । ‘त्यसैले त भनेको नि ‘लभ गर्ने समय छ’ भनेर ? अरुलाई लभ गर्न जाऊ, लभ गर्दै हिँड भनेको होइन । आफूले आफैलाई माया गर । आफैलाई प्रेम गर । आफ्नो मनको खुसीका लागि काम गर । चाहना के हो, बुझ । करले होइन, रहरले काम गर‘.।’ उत्तरा थप्दै गई( “तिमीले आर्जन गरेको सम्पत्ति केका लागि ? कमाएको प्रतिष्ठा केका लागि ? तिमीले गरेको मेहनत र दुःख केका लागि ? सबै अरुका लागि ? खै त तिम्रो पोल्टामा के छ अहिले ? त्यसैले तिमी आफ्नालागि बाँच ।’
‘सबै सम्बन्ध नाफाघाटाको सम्भावनाको खेल । खेलमैदानमा कहिले स्नेह निमोठिन्छ, कहिले बिरानासँगको निकटता वलिष्ठ हुँदै जान्छ । आफन्त र आफन्त ठानिएकाहरुसँगको सम्बन्धले कति बेला पल्टाबाजी खेल्छन्, थाहै हुँदैन । जीवन सङ्घर्षको बाटोमा जब समय व्यवस्थापनमा कमजोरी हुन्छ, सम्बन्धहरु उल्टिन्छन् । प्रयास गर्दागर्दै ती सम्बन्धले नमिठो पीडा दिन्छन् ।’
उत्तराको धाराप्रवाह प्रवचन बीचैमा रोकेर उसले पीडा बिसायो । ‘जति गर, संसार कहिल्यै तिम्रो हुँदैन । परिवारको गुनासोमा कमी आउला, अन्त्य हुँदैन । समयक्रमसँगै गुनासाका विषय थपिँदै जान्छन् । त्यसैले म फेरि पनि भन्छु( अब त कम्तीमा तिमी आफ्नालागि जिउने प्रयत्न गर । मनलाई पनि कहिलेकाहीँ खुसी राख । तिम्रो जीवन खै ? तिम्रो खुसी खै ? तिमी जुन समय खोजिरहेछौ, तिम्रो चाहनाभित्रै छ त्यो । तिम्रो मनभित्र छ । एक पटक मात्रै चाहना बुझ्ने कोसिस गर । मात्र एक पटक मनलाई सोध । तिम्रो ‘म’ के चाहन्छ ?’ जीवन सुखको दर्शन नै पढाइ उत्तराले । ‘मेरो चाहना मात्रै ? यतिसम्म स्वार्थी हुन सक्छ मान्छे ?’
‘अँ, तिमी जसरी बुझ । परिस्थितिहरु जब विपरीत हुन्छन्, तब व्यक्तिको प्रभाव र पैसा होइन मात्र ज्ञान, स्वभाव र सम्बन्ध काम आउँछ ।
नाफाघाटाभित्र स्वार्थ लुकेको हुन्छ । बढी नाफाले स्नेह र भावनालाई ओझेलमा पारी अहम्कारिता बढाउँछ । घाटाले मित्रतामा फाटो ल्याउन मद्दत गर्छ । समय समयभित्रै लुकेको हुन्छ । नाफाघाटाको सीमान्तभन्दा भिन्न ‘सुगन्धित सम्बन्ध’ ठम्याउने काम तिम्रो हो ।’ व्यस्त कार्यतालिकाको केही समय यत्तिकैमा सकिएको थियो । सायद उत्तराको समय र सम्बन्धको परिभाषा र बुझाइ पनि । समाज, संस्कृति र परम्पराभन्दा माथिको वास्तविक सम्बन्ध ‘सुगन्धित सम्बन्ध’ ले उसको माथिँगल रिँगायो निकै समय । त्यसपछि कैयौं पटक उत्तरासँगको भेटघाट जुरायो समयले, ऊप्रतिको धारणा भने परिर्वतन गराएन । ऊ थिई उत्ताउली केटी !
उसैले म्यासेन्जरमा पठाएका गीतका सयौं लिङ्कमध्येको एक थियो त्यो । जुन अचानकै ‘प्ले’ भएको थियो ।
‘हेर्दाहर्दै तिम्रो तस्वीर बोल्यो अनि रोएँ, अतीतका ती यादहरुले पोल्यो अनि रोएँ ।’
उसले गीत पूरै सुन्यो । दोहो¥याइ, तेहे¥याइ सुन्यो । कल्पनामै रात छर्लङ्ग भइसकेको थियो । निद्रा त परेन तर ऊ बिलकुल फ्रेस थियो । जीवनप्रतिको नयाँ बुझाइसँगै ऊर्जा थपिएको महसुस र्गयो । अनि सायद प्रण ग¥यो मनलाई सुखी पार्ने । आफ्नालागि जिउने । म्यासेन्जरमा आएका उसका सन्देश हेथ्र्यो, रिप्लाइ गर्दैनथ्यो । कतिपय लिंकहरु त उसले खोलेको पनि थिएन । आज भने उसले उत्तरा अर्थात् उत्ताउली केटीलाई सन्देश पठायो– ‘हिजो आज म साह्रै फुर्सदिलो भएको छु । आफैंलाई विश्वास नलाग्ने गरी ।’
कविता : देश लुटिँदा हाम्रो मुटु
-डा. अच्युतशाली घिमिरे
सुन्दर शान्त र विशाल,
अनि हिमालको उच्चतासँगै
गाँसिएको हाम्रो गौरव
र हाम्रो सार्वभौमिकता,
हाम्रो सच्चा आर्यभावना
र सहिष्णु सम्बन्धमा
सधैँ धावा बोल्दै आइरहेको छ भारत
कहिले ठुल्दाइ त
कहिले नभई नहुने छिमेकी बनेर त
कहिले रोटीबेटीको सम्बन्ध व्युँताएर त
कहिले पहाडमा नटिक्ने जवानी
र पानीको कथा सुनाएर,
भूपि शेरचनले भने झैँ
तर बुद्धू छौँ’
र त मोदीको विजयमा
वीरता हासिल गर्छौं तर
देशको समस्यामा बुद्धू भइराख्छौँ ।
आफ्नै अङ्गलाई छुट्याउन खोज्दा
चसक्क भएको छ ।
कब्जा र हस्तक्षेप
बढ्दै गइरहेका छन्,
साच्चै जङ्गे पिल्लरहरु
नक्साहरु खुम्चिएका छन्,
हाम्लाई अत्तोपत्तो छैन
देशको माटो लुछिँदा
धेरैको मुटु रोएको छ ।
नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा
भारतको यस्तै हेपाहा प्रवृत्तिले
बर्से्नि हजारौँ जनसङ्ख्याले
सास्ती भोग्दै आइराखेका छन् !
अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको धज्जी उडाउँदै
नेपालको सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी
बाँध, नहर, तटबन्ध र सडक बनाउँछ
तर हाम्रा नेता मन्त्रीहरु
जनताको मतमा सिंहदरबार पुग्छन्
रङ्ग भेद बदल्छन्
नेपालीको पसिना पचाउँछन्
दिल्लीको रेड कार्पेटमा शरण पर्छन्
नेपालीको समस्यालाई चुट्किला बनाउँछन्
अनि रात्रिभोजमा खुस्बु उडाउँछन् !
नेपालको जमिन माथि
भारतको दादागिरी र थिचोमिचो
कहाँ छन् खै ती
अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनको पालना ?
दुवै पक्षको सहमतिबिना
अर्को राष्ट्रका जनतालाई सास्ती
दिने कार्य निन्दनीय छैन र ?
कति चाहिँ हामी
जिउँदो प्रशंसक बनेर
भलादमी बनिराख्ने ?
दुःख भोगिराख्ने ?
तमाम यी समस्याको
स्थायी समाधान खोज्ने कसले ?
प्रदेश सरकार अनि
सङ्घीय दुईतिहाइ सरकार कता छन् ?
त्यही भूमिमा राजनीति गर्ने
दल कता छन् ?
मोदीको घातक उपहारलाई
राष्ट्रवादले सामना गर्ने कि ?
कविता : म धर्के मास्टर !
–दिनेश शर्मा पौडेल
अर्थात धर्के मास्टर !
कोही मास्टर भनेर मजाक उडाउछन्
कोही धर्के भनेर व्यंग्य कस्छन्
हो, वास्तवमै म धर्के मास्टर नै हुँ
तिम्रो कोरा विवेक खिपेर,
तिमीलाई अलिकति चुस्त र आकर्षक आकार ढाल्ने
तिम्रो बुद्धिको बिर्को खोलेर तिमीलाई ‘स्मार्ट’ बनाईदिने ।
म टेलर मास्टर,
तिम्रो उद्रेको भोटो टिप्दिन हर्दम तयार
मुजुरी भर्ने भन्दै बराजुले राखेको ।
तिम्रो उदाङ्ग आचारणदेखि
फोहोरी आवरणसम्म काँटछाँट गर्ने,
हो, म हजाम मास्टर
दिव्यदृष्टि उघ्रेछ तिम्रो बधाई छ तिमीलाई ।
म निस्फिक्री स्वीकार्छु
हो, म धर्के हो, धर्के मस्टर
तिमीलाई पहिलो ‘कपूरी क’ को
धर्को तान्न सिकाउने मै हुँ,
तिमीले दायाँबायाँ लर्बराउँदा
तिम्रो गन्तब्यलाई सिधा धर्को झैँ
सोझ्याइदिन हरदम तयार रहने, मै धर्के हुँ
महसुस गरेछौ, धन्यवाद छ ।
मेरो पोशाकको निलो रङ देखेर
निधार खुम्चाउँदै टिप्पणी गर्ने टाई धारी सेता मान्छेहरु हो
साच्चै मलाई मेरो पोशाकमा गर्व छ
काला कर्महरुलाई सेता खोलहरुले
ढाकछोप पार्दै गुज्रनु मेरो दैनिकी होइन !
मैले त हाँसीहाँसी स्वीकार्नु पर्छ समस्या,
अनि निस्वार्थ हमला गर्नुपर्छ र कोरिदिनु पर्छ नयाँ गन्तब्य,
दौलत र दम्भमा लालची आत्मसमर्पण गर्ने छुट छैन
र त, मलाई आत्मसमर्पणको रङप्रति
चाह होइन वितृष्ण जाग्छ
किनकि म निलो रङवाला मास्टर
आफ्नै आत्मस्वाभीमानमा खुसी छु !
बरु कहिलेकाहीँ मलाई लाग्ने गर्छ
एउटा दुबिधा आएर उभिन्छ मेरो अगाडि
तिमीलाई सिकाउने प्रयास मै
जीवन गुजारेको म
तर, तिमीलाई किन सिकाउन सकिनँ
र, अलिबढी इमान्दारिता ।
म सुध्रन चाहन्छु
मोबाइलले म्यासेन्जरमा एउटा म्यासेज आएको संकेत गर्‍यो । अहो कसले के भनेर पठायो होला ! मलाई कौतुहलता जागिहाल्यो । हतारहतार म्यासेन्जर खोलेँ र हेरेँ ।
‘ओइ गणेश, खाना खान जाने होइन ?’’ सँगै सिरान जोडिएको रूम पार्टनरले पठाएको रहेछ ।
‘ओके । जाऊँ हिँड ।’ मैले दायाँबायाँ केही नसोची टेक्स्टको रिप्लाई टेक्स्टमै गरेँ ।
हामी आआफ्नो बेडबाट उठ्यौं र किचनतिर लाग्यौं । हामीले साथमा मोबाइल लान भुलेनौं ।
हामीले सँगै बसेर खाना खायौँ । तर आपसमा एक शब्द पनि बोलेनौं । हातमा स्मार्टफोन र फोनमा वाईफाई कनेक्ट भएपछि सबै कुरा भुलिहालिन्छ । अलिनो, चर्को, पिरो, गिलो, चाम्रो, बासी, साजी खै कस्तो थियो कुन्नि खानाको स्वाद ! पत्तै भएन । न स्वादकै चर्चा भयो न त खाना कसले पकाएको थियो भन्ने नै कुरा भयो !
खानापश्चात् पूर्ववत् चुपचाप बेडमा आयौं र आफ्नै सुसे धन्दामा अलमलियौं ।
यो सातौं वर्ष हो मेरो परदेश बसाइको । म निरन्तर एउटै कारखानामा छु । त्यसैले कारखानामा धेरै विदेशी साथीहरू हेरफेर भएको मलाई याद छ । यतिखेर हामी १४ जना नेपाली कार्यरत छौं । हामी सबैजना सँगै बस्छौं । हप्ताको पाँच दिन काम र बाँकी दुई दिन छुट्टी ।
कारखानामा काम भएको दिन बिहान ७ बजे उठ्यो, सामाजिक सञ्जालको नोटिफिकेसन टुल्स चेक गर्दै सौच ग¥यो, हातमुख धोयो, केही फलफूल खान मन लागे खायो, एकैछिन फेसबुक ट्विटरको टाइमलाइन चहा¥यो र ८ः३० हुनुभन्दा पहिल्यै काममा हाजिर भयो !
दिउँसो १२ बजे कारखानाकै क्यान्टिनमा खाना खाएपछि करिब एक बजेसम्म फेसबुक, भाइबर, म्यासेन्जर, ट्विटर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालको टाइमलाइन चहा¥यो । एक बजेपछि ५ः३० सम्म फेरि काम ग¥यो । साढे पाँच खाना खाने समय हो । त्यसका लागि छुट्याइएको ३० मिनेटमध्ये हतारहतार १० मिनेटमा खानामा र बाँकी २० मिनेट सामाजिक सञ्जालमै भुल्यो ।
बेलुका छ बजेपछि नौ बजेसम्म फेरि काम गर्नुपर्छ । नौ बजे काम सकेर हतारहतार होस्टलमा आयो, नुहाइधुवाइ गर्‍यो, खान मन लागे यसो चाउचाउमा तातोपानी हाल्यो र खायो । नत्र, सीधै बेडमा बसेर सुरू गर्‍यो फेसबुक, ट्विटर यात्रा !
बेड माथि बेड, एउटै रूममा ६–७ बेड छन् । यसरी भनौं, हामी ६–७ जना एउटै कोठामा बस्छौं । तर हाम्रो बोलचाल, अहँ हुँदैन ! कसरी होस् र हामीलाई मोबाइल खेलाउने भन्दा अरू फुर्सद नै छैन । कुन सिरियलमा के भयो ? कसले कुन गेममा कति लेबल कटायो ? पबजीमा चिकेन डिनर खाने पालो कसको ? कसले कुन स्टाटसमा के भनेर कमेन्ट गर्‍यो ? कमेन्टमा के रियाक्ट गर्ने ? कसको के भनेर मेन्सन र्गयो ? रिप्लाइ गर्ने कि नगर्ने ? कसले कुन पिकमा के रियाक्ट गर्‍यो ?
कुन केटीको डिपी राम्रो छ ? कुन गु्रपमा के स्टाटस पोस्ट गर्ने ? के ट्विट गर्ने ? कति आरटी आए ? टिकटक, म्युजिक्लीमा कसले कस्तो भिडियो हाल्यो ? अथवा आफूले कस्तो भिडियो हाल्ने ? स्न्याप च्याटमा कसले हाई भन्यो ? फलानीले डीएम गरिछे के रिप्लाइ गर्ने ? इन्स्टाग्राममा कुन फोटो पोस्ट गर्ने ? स्मुलमा कुन गीत गाउने ? कुन समूहले कस्तो ट्रोल बनायो ? युट्युबमा के नयाँ आयो ?
कमेडी भिडियोहरू पनि हेर्नैपर्‍यो, साथीहरू के खाएँ भन्ने धरी लाइभ गर्छन् ! हिजो हेर्दाहेर्दै छुटेको मुभी पूरा गर्न पनि बाँकी नै हुन्छ— त्यता पनि समय दिनुपर्‍यो । चाडबाड आउँदा नयाँनयाँ फोटाहरूको बाढी चल्छ । विदेशमा चाडबाड आउने भनेकै सामाजिक सञ्जालमा हो । हेर्नैपर्‍यो । लाइक गर्नैपर्‍यो । वा भन्नैपर्‍यो । नढाँटी भनौं— पानी पिउने, सुसु गर्ने फुर्सद पनि नपाउँदै कत्तिखेर रातको १२ बज्छ थाहा नै हुँदैन । १२ बजे त सुत्नैपर्‍यो ।
हप्तामा काम गर्नुपर्ने पाँच दिन त होस्टलका साथीहरूसँग लगभग मेरो बोलचालै हुँदैन । कसैले बोलाइ हाले पनि जवाफ दिन हम्मे पर्छ । ‘ह्याँ आफूलाई हग्ने फुर्सद छैन नानाथरी सोधेर ल्याङ गर्छन् मुलाहरू’ भनौं झैं लाग्छ । बाँकी रह्यो शनिबार र आइतबार । यी दुई दिन पनि सामाजिक सञ्जाललाई नै सुम्पने गरेको छु ।
कहिलेकाहीँ त महिना दिनसम्म घरमा फोन गर्न पनि बिर्सिंइदो रहेछ । घरबाटै फोन गरेर सम्झाउनुपर्छ । फेरि हाम्रोमा सजिलो के छ भने, हरेक कुरामा कामको बाँडफाँट छ । ड्युटीको दिन खाना पकाउनु नपरे पनि छुट्टीको दिन कारखानाले खाना दिँदैन । पकाउनैपर्‍यो । खाना पकाउनलाई क्रम संख्या छ एकदेखि १४ सम्म । आफ्नो नम्बर याद गरेर मोबाइलमा रिमाइन्डर राखेपछि पुगिहाल्यो ।
ट्वाइलेट–बाथरूम सफा गर्ने नम्बर छ । आफ्नो याद ग¥यो पुगिहाल्यो । बाँकी कसैलाई पिउन मन लागे नजिकै पसल छ । आफ्नो सुरले त्यहीँ गयो मन लागेको खायो, पियो । अथवा पसलेको नम्बरमा एक कल ग¥यो सामान कोठामै आइपुगिहाल्छ । रूममै पनि खान मन लागे आफ्नो सुरले पकायो खायो । सपिङ गर्नेहरूले महिनाभर अनलाइनबाटै गर्छन् र महिना मरेपछि हिसाब भाइबरमा पठाइदिन्छन् । पैसा तिर्नका लागि खाता भएको बैंकको स्मार्ट बैंकिङ छँदैछ । खातामा पैसा पठाइदियो कुरै खत्तम ।
छुट्टीका दुई दिन पनि लगभग मौनतामै बित्छ । बोल्नै परे पनि म्यासेन्जर भाइबर छँदैछन् मुखलाई बित्थामा किन दुःख दिने !
च्याटबक्समा पनि केटा साथीहरूसँग कुरै हुँदैन । ‘बोको भएर बोकैसँग के च्याट गर्नु’ साथीहरूले डाइलग मारिहाल्छन् ।
आज भने साथीको म्यासेजले कताकता अप्ठ्यारो महसुस गरिराखेको छु । हुन त अरू दिनजस्तै आज पनि ‘खाना खान हिँड’ भनेको हो उसले, नयाँ केही होइन । तर कताकता मनमा शरम लागेर आइरहेछ । साथीको म्यासेजले मलाई म कसरी एकलकाँटे हुँदै गइराखेको छु भन्ने कुराको थोरै हेक्का गरायो । सोच्न बाध्य भएँ ।
इन्टरनेटको विकासले मान्छेहरूको दैनिक काम सहज भयो । सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै मान्छेहरूमा कम्युनिकेसन सहज भयो । छरितो भयो । युट्युबले मनोरञ्जन दिन्छ । विकिपिडियामा पढ्नका लागि धेरै कुरा पाइन्छ । गुगलमा खोजेको सबैथोक पाइन्छ । सपिङको लागि इन्टरनेटले विश्व बजारलाई केही एप्लिकेसन्समा खुम्च्याइदिएको छ । एकै क्लिकमा सामान हातहातमा !
स्मार्ट टेक्नोलोजिको विकासले मान्छेका दैनिक कामहरू अत्यन्तै सहज र सरल बनाएको छ । साधारण प्रेसर नाप्नको लागि अब डाक्टरकैमा जान जरूरी छैन । घडी अथवा मोबाइलका एप्लिकेसनले बताइदिन्छन् । दिनमा कति व्यायाम गर्ने ? कति पानी पिउने ? निक्र्योल एप्लिकेसनहरूले गरिदिन्छन् । बाहिर निस्कँदा छाता बोक्ने कि नबोक्ने ? मौसम कस्तो हुन्छ ? बाक्ला–पातला कस्ता लुगा लगाउने ? ट्राफिक जाम छ कि छैन ? एप्लिकेसनले बताइहाल्छ । समाचार पढ्न, टीभी हेर्न, पात्रो हेर्न यावत् कुराहरूका लागि पुस्तक पसल, स्टेसनरी, लाइब्रेरी धाउनै पर्दैन । अचेल मान्छेहरू तीर्थ ब्रत पनि अनलाइनबाट गर्न थालेका छन् । टीभीले देखाउँछ, अक्षता छर्कियो रामराम भन्यो बस् ! कतै टाढै घुम्न जानुपरे एयर बीएनबीले टिकेटिङ, खान बस्नमात्र हैन अनलाइनमै ट्रेकिङ गाइड पनि खोजिदिन्छ । हुँदाहुँदा कतिसम्म भैसक्यो भने रिस उठेका बेला सःशुल्क गाली गर्न मिल्ने एप्सहरू पनि बनेका छन् । पैसा लिएर तपाईंको गाली सुनिदिने मान्छेहरू अनलाइनमा जति पनि भेटिन्छन् !
संसारमा के भइराखेको छ, निमेषभरमै थाहा हुन्छ । साधारण स्मार्टफोन र त्यसमा इन्टरनेट भए दुनियाँ आफ्नै हातमा आइपुग्छ । यो एकदमै खुसीको कुरा हो । प्रविधिले हाम्रो हातैमा विश्व थमाइदिएको छ ।
‘भोकले भोक जन्माउँछ ।’ सुन्दा अनौठो लाग्ला । ‘भोकले त भोजन गराउँछ । कसरी भोक जन्माउछ ?’ भन्नुहोला । कुनै पनि प्राणी एकपटकको भोजनले सन्तुष्ट हँुदैन । जब मान्छेलाई तिर्खा लाग्छ पहिलोपटक पानीले प्यास मेटाउँछ । जब त्यही मान्छेलाई अर्कोपटक प्यास लाग्छ उसलाई कोल्डड्रिंक्सहरू चाहिन्छ । तेस्रोपट प्यास लाग्दा ध्यान सोमरसतिर पुग्छ । जब मानिसले पहिलोपटक पिउँदा एक पेगमा मात्छ । दोस्रोपटकमा उसलाई मत्ताउन दुई पेग चाहिन्छ । तेस्रोपटक चार हुँदै उसलाई अन्त्यमा रक्सी पानीजस्तो लाग्छ । ऊ नचाहँदानचाहँदै खुंखार ड्रंकर्ड बनेर निस्कन्छ । यसै थ्योरीमा आधारित छ भोकले भोक जन्माउछ भन्ने ।
इन्टरनेटको विकास भोक हो, सूचनाको भोक । सहजताको, सरलताको नाउँमा इन्टरनेटले अन्य एप्सहरू जन्मायो, नयाँनयाँ प्रविधिहरू जन्मायो, जन्माउन बाध्य बनायो । त्यो भन्दा राम्रो, त्यो भन्दा बहुउपयोगी बनाउन के गर्नुपर्छ ? मान्छेहरू एकपछि अर्को प्रयोगहरू गर्न थाले । कसले के नयाँ ‘क्रियटिभ’ गर्ने होडबाजी चल्न थाल्यो । भोकले भोक जन्मायो तिर्खाले प्यास । भोकले भोक जन्माउनु नौलो कुरा होइन । भोक हुनु जरूरी छ ।
साँच्चै मैले सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग गरेर के उपलब्धि गरेँ त ? मसँग जवाफ छैन । बरू आँखा बिग्रिए । स्मार्टफोन चलाउनुअघि माइनस जिरो प्वाइन्ट सात पाँचको चस्मा लगाउँथेँ । अहिले पावर बढेर प्लस माइनस तीन प्वाइन्ट जिरोको चस्मा लगाउँछु । दिनैजसो टाउको दुखिरहन्छ । आज पहिलोपटक मलाई मैले सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरिरहेको छु भन्ने कुराको हेक्का भएको छ ।
मैैैले सामाजिक सञ्जाल चलाउने मात्र हैन मलाई त सामाजिक सञ्जालको एडिक्सन नै भएको छ । बिनाफेसबुक, बिनाट्विटर म एकैछिन पनि बस्न सक्दिनँ । कतै साथी भेट्नै परेर जाँदा पनि ध्यान मोबाइलमै हुन्छ । कहिलेकहीँ किताब पढ्छु भनेर थाल्छु, एक पेज पढी नसक्दै तीन पटक मोबाइलको नोटिफिकेसन इन्डिकेटरमा आँखा पुर्‍याइसकेको हुन्छु । कुनै दिन नेट गए मलाई फड्को हुन्छ । खाना रूच्दैन । कहाँ केही प्रलय नै भएजस्तो लग्छ ।
सामाजिक सञ्जालहरू नभए म कसरी बाँच्न सक्छु होला ? फेसबुकको नोटिफिकेसन एकदिन नहेरे कसरी दिन कट्छ होला ? ट्विटर नचलाए मैले सूचना कहाँबाट पाउने ? मलाई थाहा छैन हाम्रा बाउबाजेहरू कसरी समय कटाउँथे ? म अनुमान लगाउनसम्म सक्दिनँ, तिनले बिनासामाजिक सञ्जाल कसरी जिन्दगी गुजारे होलान् ? सोच कतिसम्म संकुुचित भइसक्यो भने सामाजिक सञ्जाल नचलाउने मान्छे असामाजिक हो जस्तो लाग्छ ! तर दुर्भाग्य, म आफैं असामाजिक भइराखेको छु । एकलकाँटे भइराखेको छु । प्रविधिबिना दुनियाँ चल्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
म यतिबेला सम्झँदै छु, कुनै समय थियो हामी शनिबार सबै साथीहरू मिलेर घुम्न निस्किन्थ्यौं । यहाँ परदेशमै आउँदा पनि सुरूमा स्मार्ट प्रविधिको विकास भइसकेको थिएन । त्यतिखेर हामी हप्ताहप्तामा साथीहरू भेटघाट गर्ने गथ्र्यौं । मीठामीठा पकाएर खाने, घुम्न जाने, समूहमा बसेर तास खेल्ने गथ्र्यौं । अहिलेपनि हामी ती खेलहरू त खेल्छौैं, तर एक्लाएक्लै । मोबाइलमा । विश्वको आफूजस्तै अर्को कुनै एक्लो खेलाडीसँग ।
कतिसम्म एकलकाँटे भइएछ भने, मान्छे दुर्घटनामा परेको छ उसलाई सकेसम्म चाँडो प्राथमिक उपचारको जरूरी छ । चिन्ता लिनुपर्नेे ‘कसरी उसको प्राण जोगाउने’ भन्नेमा हो, तर त्यसमा चिन्ता नलिएर फेसबुकमा लाइभ कसरी देखाउने भन्नेमा ध्यान जान थालेको छ । अरूभन्दा अघि फोटो अपलोड गर्न आतुरी हुन्छ ।
कसैको देहावशान भयो भने सबैभन्दा पहिले मृतकको फोटो सोसियल मिडियामा अपलोड गरेर कति जनाले ‘रिप’ लेखे भनेर कमेन्ट गन्न हतार हुन्छ ! मान्छेहरू झगडा गरिराखेका ठाउँमा लुकेर भिडियो खिचेर अपलोड गर्न मन लाग्छ । यसले मेरो नैतिक धरातल खस्काएको छ । म दिनानुदिन पतनको बाटोमा लाग्दै छु भन्ने देखाउँछ ।
कुनैबेला परिचय गर्दा म हजुरको नाम के हो ? भन्थेँ । अचेल हजुरको फेसबुक युजर्सनेम के छ ? भन्छु ।
म यति स्वार्थी भइसकेँ कि हरेक कुरामा ‘म’ जोड्न थालेको छु । मान्छेको भीडमै हराउन थालेको छु । मान्छेसँग ठोक्किँदा पनि मलाई पहाडमा ठोक्किएजस्तो लाग्न थालेको छ । दिनदिनै चेतनाहीन, संवेदनाहीन हुँदैछु । ‘म’ नभए विश्व नै रहँदैन सोच्न थालेको छु !
सामाजिक सञ्जालले म एक्लिएको छु । हुन त सामाजिक सञ्जालमा फ्रेन्ड र फलोअरको संख्या बढिरहेकै छ, तर यथार्थमा जति फलोअर्स बढिरहेका छन् उति नै म एक्लिरहेको छु । पहिलो पल्ट आज मलाई मेरो यो ऊर्जाशील समय सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगमा खर्चिएर नष्ट गर्नु हुँदैन भन्ने लागिरहेको छ । यो ऊर्जा दिएको हो– साथीको म्यासेजले । अब म राम्री केटीको फोटोमा के कमेन्ट गर्ने भनेर सोच्ने समयमा जिन्दगीलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्न प्रयत्न गर्नेछु । पोर्न मुभी हेरेर बस्ने समयमा कसरी जिन्दगीलाई सिर्जनात्मक बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्ने प्रयत्न गर्नेछु । म्यासेन्जरमा हाई लेख्नुको साटो सँगैको साथीलाई धाप मारेर ‘के छ यार’ भन्नेछु । यसो गर्दा साथीलाई बोल्न कर लाग्छ । ऊ जरूर बोल्नेछ ।
म फेसबुक डिएक्टिभेट गर्दिनँ । ट्विटर डिएक्टिभेट गर्दिनँ । युट्युब अनस्टल गर्दिनँ । मैले आजसम्म यिनीहरूको दुरूपयोग गरेँ । म आजदेखि यिनीहरूको सदुपयोग गर्नेछु । यो मेरो निजी प्रतिज्ञा हो ।
मान्छे सामाजिक प्राणी हो, मलाई पनि समाज चाहिन्छ । सामाजिक सञ्जालले मान्छेलाई जोड्दैन, केवल एक्ल्याउँछ । म जोडिन चाहन्छु, एक्लिन हैन । तपाईं सबै मेरा आफन्तहरू हुनुहुन्छ । म तपाईंलाई प्रेम गर्छु ।
प्रिय साथी तपाईंहरुसँग मेरो एउटै अनुरोध छ— म अनलाइन देखिइनछु भने बिर्सिएछ नभन्दिनुहोला । म सुध्रन चाहन्छु ।
स्वरसम्राट नारायण गोपालको २९ औँ स्मृति दिवस आज
काठमाडौं : आज स्वर सम्राट नारायण गोपालको २९ औं स्मृति दिवस मनाईँदैछ । विक्रम सम्बत १९९६ सालमा काठमाडौंको किलागलमा जन्मेका नारायण गोपालको २०४७ साल मंसिर १९ गतेका दिन निधन भएको थियो ।
लोकप्रिय गायनकलाकै कारण उनलाई स्वर सम्राटको उपाधि दिइएको थियो । स्वरसम्राटको स्मृतिमा नारायणगोपाल संगीत कोषले आज काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम गर्दैछ । महाराजगञ्जमा हुने कार्यक्रममा दुई संगीतकर्मीलाई सम्मान गरिने कोषले जनाएको छ ।
यसवर्ष गायक, संगीतकार र गीतकार जगत मर्दन थापा र संगीतकार रन्जित गजमेरलाई ताम्रपत्र सहित २५ हजार नगद राशीले सम्मान गर्न लागिएको हो । नारायणगोपालले २०२० सालमा रेडियो नेपालवाट स्वर परीक्षा पास गरेपछि गायन यात्रालाई निरन्तरता दिएका थिए ।
उनले एक सय ३६ भन्दा धेरै गीत गाएका छन् । नारायणगोपालका म त लालीगुारास भएछु, ए कान्छा ठट्टैमा यो वंश जान लाग्यो, एउटा मान्छेको मायाले लगायतका थुप्रै गीतहरु चर्चित छन् ।
‘हाम्रो बर्माः हाम्रो कर्म’ पुस्तक विमोचन
काठमाडौं : समाजसेवी नन्दराज न्यौपानेको ‘हाम्रो बर्माः हाम्रो कर्म’ सोमबार काठमाडौंमा लोकार्पण भएको छ । नेपालका प्रथम गभर्नर हिमालय शम्शेर, गीतकार, लेखक तथा फिल्म निर्देशक यादव खरेल, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले संयुक्त रुपमा पुस्तकको लोकार्पण गरेका हुन् । बर्मामा नेपालीहरुले व्यतित गरेको लामो समय, नेपाली जनजीवन र नेपाली भाषा संस्कृतिको विकास लगायत, आफ्नो आठ दशकभन्दा लामो अनुभव समावेश भएको न्यौपानेको कृति ‘हाम्रो बर्माः हाम्रो कर्म’ पुस्तकबारे विभिन्न वक्ताहरुले कार्यक्रममा बोलेका थिए ।
समाजसेवी न्यौपानेले म्यान्मामा नेपालको कला, संस्कृति र भाषालाई संरक्षण गर्नुका साथै नेपालीको हितमा महत्वपूर्ण काम गरेको प्रथम गभर्नर शम्शेरले बताए । उनले लेखक न्यौपानेले बर्मामा आफूले करिब चारदशकअघि काम गर्दासामाजिक कार्य देखेको र लामो समय सामाजिक कार्यक्रममा संलग्न अनुभव सबैका लागि मार्गदर्क हुने बताए । लेखक तथा गीतकार यादव खरेलले धेरै न्यौपानेको पुस्तकले बर्मामा नेपाली मुलका मानिसहरुले भोगेको कुरा बाहिर ल्याउने प्रयास गरेको र बर्माको बारेमा जानकारी लिन पुस्तक महत्वपूर्ण हुने बताए ।
अर्का वक्ता डा.उपेन्द्र महतोले बर्मामा जाँदा उनका अनुभवहरु सुन्न पाएको र गरेको काम देख्न पाएकोले उमेर पाको भएर पनि उनको कर्मबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्ने बताए । बर्मामा उनले गरेको कामबाट आफू प्रभावित भएको र उनले हाल पनि गरिरहेको काम हेर्दा उनमा युवा जोश नघटेको महतोले बताए । पितृभूमिमा आएर आफ्नो कृति विमोचन हुन सकेकोमा आफूलाई खुसी मिलेको र पुस्तकले म्यानमार र नेपाललाई जोड्न खोजेको उनले बताए पुस्तकका सम्पादक रमेश खड्काले बर्माको यो पुस्तकले दुईलाखभन्दा अधिक जनसंख्या भएको बर्माका अनुभवलाई बाहिर ल्याएको र एउटा नेपाली गरेको दुःख, संघर्ष र सफलताको कथा पुस्तकले समेटेको बताए ।
कार्यक्रम आयोजक संस्था नेपाल म्यानमार मैत्री परिषदका अध्यक्ष शंकर घिमिरेले पुस्तकले नेपाल र म्यान्मारलाई जोडेको र दुवै देशलाई जोडेको भाषा संस्कृतिको सम्बन्ध यसले अझ उचाइमा लैजाने बताए । पुस्तकले बर्मामा एकजना नेपालीले प्राप्त गरेको अनुभवलाई लिपिवद्ध गरेको र यो धेरैका लागि सिकाइ हुन सक्ने डा. पदम न्यौपानेले बताए ।
म्यान्मार सरकारद्धारा नागरिकलाई दिइने सर्वोच्च सम्मान अग्रमहा श्रीसुधम्ममणी ज्योतीधर उपाधि प्राप्त ८४ वर्षीय नन्दराम न्यौपाने गत ६ दशकअघिदेखि सामाजिक सेवामा संलग्न छन् । उनी म्यानमारको नेपाली समाजको विभिन्न पदमा काम गर्दे आएका छन् । उनलाई म्यानमार सरकारले १७ वर्षभन्दा बढी माइन मन्त्रालयको सल्लाहकार बनाएको थियो । हाल उनी सरकारद्धारा गठित हिन्दु सेण्टर बोर्डका अध्यक्ष हुन् ।
कविता : एका बिहानै
एउटा पुरुष श्रीमतीको सिरानेबाट भाग्छ
कलिला सन्तानको कान्छि ओंलाको टुप्पाबाट भाग्छ
बृद्ध बा आमाको धमिलिदै गइरहेको ईन्द्रियहरुबाट भाग्छ
कहाँ कहाँबाट भाग्छ
कहाँ कहाँसम्म पुग्छ
भाग्दा भाग्दै तर्सन्छ
आफ्नै मुटुको धड्कनबाट
आफ्नै पैतलाको धुनबाट
बिहान बेलुका बडिरहने घटिरहने आफ्नै छायाँबाट
कहिलेकहीँ आफ्नो हलुका खल्तिबाट भागेर झुट बोल्छ
कहिलेकहीँ घुमाउरा गोरेटामा घुमेर
जिन्दगीको मुल सडकबाट भाग्छ
यसरी एउटा पुरुष भागिरहन्छ !
तर न भन्नु कायर रहेछ
न भन्नु हरामी रहेछ
न भन्नु निष्ठुर रहेछ
न भन्नु पापी रहेछ
ऊ भागेन भने प्रेमको दियो त बल्छ
तर जीवनको दियो ?
प्रेम गर्न पहिलो शर्त बाच्नु पर्छ
ऊ भागेर पनि बाँचिरहेछ ।
कविता : भाग्यरेखा
न पुर्न्लिखित हुन्छन् न मेटिन्छन्
पूर्व्निर्धा्रित र अकाट्य हुन्छन्
अविरल हिण्डिरहेछन् मेरो भाग्य बोकेर
डोर्याइरहेछन् मेरो जीवनलीलालाई
म भौँतारिरहेछु र पछ्याइरहेछु यी नागबेली पथहरुलाई
अनजान जङ्गलभित्र हराएको दुधमुखे शिशु झैँ
यी भाग्यका हस्तगोरेटाहरू आफैंमा बोकेर
दौडिरहेछु म जीवनोपर्यन्त
भाग्यका इशाराजन्य लिपिहीन दस्ताबेजहरू मुठ्ठीमा च्यापेर
बत्तीमुनिको अँध्यारो झैँ
आफ्नै मुठ्ठीभित्र भाग्यरेखाहरू अठ्ठयाएर
म भागिरहेछु भाग्य खोज्न
आफ्नो जीवनरेखा हत्केलामा कुँदाएर
कुदिरहेछु बाङ्गोटिङ्गो जीवनमार्गमा
अन्तहीन लक्ष भेदन गर्न
आफ्नै जीवनलीलाका रहश्यमय डोबहरू पढ्न नसकेर
भौँतारिरहेको छु म ऐश्वर्यशाली भाग्य खोज्न
आफ्नैे हत्केलाको भाग्यरेखा बुझ्न नसकेर
सफलता–असफलता र भाग्य–दुर्भाग्यको ढाक्रो बोकेर
गुहारिरहेकोछु त्रिकालदर्शी महात्मालाई
रहश्य र दुबिधाको पन्तुरो फुकाउन
घिस्रिरहेछ मेरो लेखान्त त्यही भाग्यरेखाले सुसज्जित हत्केला टेकेर
अन्ततोगत्वा आशा र निराशाको नागबेली मोडहरुमा
मैले मेरो हस्तरेखाको भाग्य पढाएँ
पण्डितबाणीद्वारा राजकुलको भाग्य सुनें
म धर्तीमा टाँसिएको धुलोले जून छोएजस्तो महसूस भयो
म अन्धकार औँशीलाई पूर्णिमाको आड पाएजस्तो भयो
म फुर्किएँ, बुर्किएँ, कुर्लिएँ र सत्कर्म त्यागें
अन्तत म बिपनामा पछरिएँ र माटोमा बज्रिएँ
हे भाविलिखित भाग्य पढ्ने पण्डितहरू हो
पहिला तिमी आफ्नै हत्केलामा भाग्य खोज
हे हस्तरेखामा भाग्य देख्ने दिवा स्वप्नवादीहरू हो
तिमी मिथ्यालाई होइन कर्ममा भाग्य खोज
हे हस्तरेखा बोकेर भाग्यसगरमा बिना पङ्ख उड्न खोज्ने अन्धमनुवा हो
बुझ, हस्तरेखा एउटा कपोलकल्पित भाग्यचित्र मात्रै हो
भाग्य तिम्रै सत्कर्म र लगनशीलतामा छ
बरु तिमी आफैँ भाग्यरेखाको चित्र कोर
बिपनाको यथार्थताको धरातलमा उभिएर
परिश्रम र सत्कर्मको चित्रपटमा
भावी भावना हो,भाग्यरेखा दैवीमानचित्र
कर्म भाग्य हो,अन्धविश्वास मरुतृष्णा
निवन्ध : घिस्रिएको अफिसियल जिन्दगी !
चालिसपछिका केही वर्ष भोगेका मेरा आँखाहरु जीवनको तेस्रो गोरेटाको परिभाषा खोजिरहेछन् । नेपालीका अधिकांश बाटा जागिरसँग आएर टुङ्गिएको दृश्यमा यी आँखा बानी परेका छन् । त्योभन्दा अलि पर विदेश, अझै पर व्यापार र सबभन्दा नजिक दुईखाले खेती हुन्छन् । एउटा माटामा उब्जाउने खेती अर्को निराशाको खेती ।
मैले पनि बीसौं वर्षअगाडि जागिरको अङ्गालोमा बेरिएर एक आम नेपालीको झैं सपना पूरा गरेकी थिएँ । अनि जीवनको दैनिकीमा अफिस थपिएको थियो । पाइलामा अफिसको बेग्लै जन्जिर बाँधिएको थियो, भलै मेरा त्यसपछिका सारा सपना जागिरले दिएको फलिफापबाट पूरा भएका छन् ।
हिँडेपछि, एक फाइलभन्दा बेसी सोमरस पिएजस्तो समयकै नशा लाग्दोरहेछ । जागिरकै नशा पो रमरम लाग्दोरहेछ । जागिरको दूध खाए पनि नशाचाँही अर्कै लाग्दो रहेछ । शक्ति र पदको नशा । पैसाको समेत नशा । ससाना फाइदाका लागि सत्तामा पार्टीका नेता कार्यकर्ता यताउता पोइल गएझैं एजेन्डा मिलेपछि जागिरका पात्रहरुले पनि अर्कै जुनीको अवतार लिएको धेरैपटक देख्नु प¥यो । दुइवटा भाषा बोल्ने जिब्राहरु, दुइटा आँखा हेर्ने दृष्टिहरु र पदीय दायित्वको धज्जी उडेको समेत नमस्कार गरेरै स्वागत गरियो ।
जागिरको भाषामा मिसिएको अलौकिक सालीनता जिब्रोभन्दा भित्रबाट निस्किएको कहिल्यै देख्न पाइएन । न प्रशंसामा, न काममा, न वर्कर युनियनमा, जागिर इमानदारीभन्दा बेसी निजी लालच टाँसिएर काइते जीवन बाँचिरहेको टुुलुटुलु हेरियो । प्रक्रियाको हवाला दिएर लिएको प्रतिशोधको मारमा परेका कैयन् पहेँला अनुहारको सहयोग गर्न पनि सकिएन । न चुपचाप काममा जोतिएको कारिन्दाको काँधमा चढेर सफलताको ढोल पिटिहिँड्ने कार्यालयका आधिकारिक भाषा नै सच्याउन सकियो ?
कताकता दस पाँच नापेर जिन्दगी हारियोजस्तो नैराश्यको नशा चढ्छ । माइतमा आमासँग समेत एक रातभन्दा बढी नबसेकी छोरी भएको जागिरको सुरुदेखि नै हो । त्यसै हुँदाहुँदै कमाउने छोरीलाई आमाबुवाले पनि कम माया गर्दा रहेछन् भनेर उल्टै जन्मदातालाई फतुर अनुभूतिको लबस्तरो आक्षेपसमेत लाइयो । कताकता अन्नदाताको प्रतापले आफ्नै कमाइमा बाँचेको भ्रम छर्नुको सफलता र सधैंको महिनावारी हिसाबको टुमटुम सी ग्रेडको सिनेमाका द्वन्द्व जसरी उत्रिएर आउँछन् । त्यसबेला जागिर नखाएर घरमै आरामले बसेका दिदीबहिनीको मस्तीको डाह पनि राखियो । तिनले किनेका मूल्यवान गहना र लुगाको आरिस गरियो मनमनै । कहिलेकाहीँ जागिरले दिएको रकमी सुरक्षाको महत्वले आशाको रसायन पैदा गर्न सक्दैन रहेछ । न कतै आरामले घुम्न दिएको छ, न बिरामी भएको सन्तानसँग जाती हुन्जेलसँगै बस्न दिएको छ । कहिल्यै सामाजिक हुन पाइएन । न कोही आफन्तले लाएको पूजापुराणमा एउटा सिङ्गो दिन सकियो ? न मराउपराउमा मन राख्न केही दिन खटेको सन्तोक गर्न सकियो । न उच्चपदस्थको भजन गाएर निजी फाइदा लुट्ने भूमिका निर्वाह गर्न खोक्रो नैतिकताले दियो ? खैनी नमाड्ने अभयलिङ्गी हातहरु, चियर्स नगर्ने दैनिकी र प्रस्ट बोल्ने धृष्टता बोकेपछि सबैतिरको प्राथमिक सूचीबाट छाया पनि गायबमा पर्दोरहेछ । त्यताबाट सोची ल्याउँदा कारिन्दा मन धुरुधुरु रोइदिन्छ जसरी नशामा धूत कोही पियक्कड मधुशालामा निर्बाध रोइदिन्छ ।
यसरी नशा धूत भएका बेला मान्छे न्यायच्यूत हुन सक्दैन । यी आँखामा प्रमुख पदधारीको जवाफदेहिताले सताइरहेको बेचैन समय पनि प्रत्यक्ष देखिन्छ । तर उच्च हुनुको मर्म लिएर उच्च जोखिम बाँचेको हाकिमको तनावको हिसाब कार्यालयको बहीखातामा लेखिँदैन । तिनका गाडीका नम्बर, इन्धनको बिल, वैदेशिक भ्रमण र बैठकको संख्या एकएक लेखिन्छ । तिनीहरूभन्दा उच्च ओहोदाकाहरूले तिनका कान समात्ने गरेका अदृश्य शक्तिका हातहरू देखिन्छ । न यिनका कलमका निब घुमाउने अदृश्य टेलिफोनका कलहरू नै सुनिन्छ ? कानुन, नियमावली र परिपत्रको दफाको व्याख्या कुनै सीएको वित्त शीर्षकको समझमा आउँदैन र बेहिसाब रहन्छ । अनि निर्णयको पल्ला कता ढल्किन्छ त्यो निर्णायक स्वयंले थाहा पाउँदैन । थाहा पाएर चेतना बोकी हिँड्नेले त्यहाँ धेरैसमय टिक्न पाउँदैन । ऊ इमानदार भइरहन्छ अख्तियारको आस्थामा आँच नआउन्जेल र कसैको छिर्के निवेदनमा ऊ फेरि बलि हुन बेर लाग्दैन अफिसियल्ली । त्यसैले टिकाउ निर्णय भएको बारबार हेरिबसियो अफिसियल्ली । चाहे त्यो नीतिगत अपचलन नै किन नहोस् नागरिक ताली पड्काएरै बसियो रमिते हलको पछिल्लो सिटमा । कहिलेकाहीँ उच्चहरूले कोही नजिककालाई दिने सिस्टमबाहिरको क्षणिक लाभ, करमुक्ति अथवा राम्री काज त मह काढ्नेले चाटेको हात मात्र हो । तिनले निरन्तर लिएको जोखिमको साइड बिजिनेस मात्र हो । केही तलमाथि परिहाले पत्रिकाले बजाउने समाचारको मूच्र्छनामा सबभन्दा पहिला तिनैले पाइलाले नाच्नुुपर्छ । हत्कडीको चुरा लगाउनुपर्छ । नत्र सेटिङ नमिलुन्जेल गर्धन समात्ने कानुनी बाघपञ्जाको तिनैले सामना गर्नुपर्छ । त्यसैले अनिर्णयको बन्दी भएर बजेट फ्रिज हुनु एकदम स्वाभाविक हो रहेछ अफिसियल्ली । किनकी काम गर्नु सबभन्दा अप्ठ्यारो अफिसियल जवाफदेहिता हो । काम गर्दा हजार नाजायज प्रश्नका जवाफ दिन थाल्नुपर्छ । काम गरेन भने प्रक्रियामा छ भन्दा भइहाल्छ । घाम झुल्किहाल्छ । अस्ताइहाल्छ ।
अफिसियल्ली बाँच्न नजानेर चित्त दुखाउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने भर्खर थाहा भयो । एकै परिवार भएर वर्षौं सँगै बाँचेका मनुवाको अफिसपछिको नभेट देख्दा बेकार लाग्छ सम्बन्ध । ऐन मौकामा आफ्नै साथीविरुद्ध चुक्ली लगाउने साहस हुनु अनिवार्य हुन्छ अफिसियल मित्रतामा । झूटो प्रमाणसमेत पेस गर्न सक्नुपर्छ त्यसबेला । अझ अफिसियल भाषाको व्याख्या सुनेपछि मौनव्रत बस्नु जायज लाग्छ । मनमा सेवा सफा नभए पनि, नियत सफा नभए पनि, सेवाग्राहीको फाइलमा कागजातको हलो अड्काए पनि भाषा मिलाएर बोल्न जान्नु नागरिकको उच्च सेवा हुन्छ । मूल्याङ्कनको लाभ र बढुवाको चाखले सहकार्यको नोकरशाही हातहरू मिल्छन् । अर्को इमानदार कुनै बलियो भिलेनको मुक्का नपाए पनि पछारिएको पछारिएकै सिद्धिन्छ । तिनको वकालतमा कोही पदीय भगवान् हाजिर हुँदैन । न तल न माथिको । यसरी केवल इमान र आत्मउत्प्रेरणाले कार्य गर्ने कारिन्दा माथिमाथि चढ्नेहरूको लोकन्ते मात्र हुन्छ र अफिसियल्ली जोकर हुन्छ । बिहे अर्कैले गर्छ मनोरञ्जन अर्कैले उठाउँछ घरजम अर्कैले गर्छ उसको पिठ्युँपछाडि । उसको अनुहारको हाँसो खोसेर उसैलाई लाखे नचाइरहेका र त्यही नाचमा रमाइरहेका अफिसियल्ली जजहरु देखेर धिक्कारको सुसेली तान्न मन लाग्छ । साला अफिसियल सहिद जिन्दगी ।
र मैले खोजेको तेस्रो गोरेटोमा गन्तव्यको धूमिल चित्र फेला पर्न थालेको छ यतिखेर । पहिलो धर्कोमा मानवीयताको अवकाश ठान्न थालेको छु । तर अफिसियल जीवनको आयु एक दिन सकिन्छ भन्ने बिर्सनुपर्ने अनिवार्य सर्त रहेछ । जागिरभन्दा पर्तिर पनि अर्को संसार छ भन्ने नसम्झनु, संवेदना र आत्मिक सद्भाव नराखी मिलेर बाँच्न जान्नु अफिसियल जीवनको सार रहेछ । सम्बन्धको औपचारिक नजिकपनको आभास दिएर अमूक प्रतिफलसम्म कसैलाई आफन्त बनाउन सक्नु अनि उद्देश्य प्राप्त भएपछि लौरो फ्याँक्नु अफिसियल चलाखी रहेछ । अफिसियल कूटनीतिक भाषाको विज्ञता हासिल गर्नु, अफिसियल सङ्गीतको आँगनमा भेष फेरीफेरी, समूह फेरीफेरी भद्दा तालले नाच्न जान्नु उचित हुने ज्ञान प्राप्त भएको छ । सबभन्दा पहिला नैतिकता पखालेर चोखो हुनु अनिवार्य रहेछ । नीति सच्याएर होस्, नियम खुम्च्याएर होस्, फलानाले गर्दा भनेर अपजस पन्साएर होस् जसरी हुन्छ आफ्नै दुनो सोज्याउन जान्नु नै सफलता हो रहेछ अफिसियल्ली । चाहे अर्काको खप्परमा लात किन नलागोस् । तर यी सबै परिघटनाका परिच्छेदहरुमा देश र जनताको सेवाका लागि हो भन्ने मन्त्र भट्याउनचाँही कसैले बिर्सनु हुँदैन रहेछ अफिसियल्ली ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा रमेश बिजी निर्वाचित भएका छन् । मंसिर ६ देखि ८ गतेसम्म पोखरामा भएको प्रतिष्ठानको सातौँ महाधिवेशनमा निकटतम प्रतिस्पर्धी विष्णु खत्रीलाई ३९ मतले पछि पार्दै बिजी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रीता थापामगर, प्रथम उपाध्यक्षमा पशुपति शर्मा, द्वितीय उपाध्यक्षमा रामजी खाँड, महिला उपाध्यक्षमा राधिका हमाल, महासचिवमा सुवास केसी, उपमहासचिवमा शङ्कर विसी र शिव हमाल, साङ्गठनिक सचिवमा खुमन अधिकारी, महिला सचिवमा जमुना राना मगर र सहकोषाध्यक्ष महिलातर्फ पूर्णकला बिसी निर्विरोध चयन भएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य महिलातर्फ सम्झना लामिछाने मगर, जानकी तरामी मगर, अञ्जली अधिकारी, जुना श्रीष मगर, अमृता लुङ्गेली मगर, सरला पाण्डे र सीता राना निर्वाचित भएको महाधिवेशन आयोजक समितिका सहसंयोजक सुरेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए । खुला केन्द्रीय सदस्यमा देवी घर्ती, पिएन सापकोटा, प्रकाश सपुत, पुरुषोत्तम भण्डारी, प्रकाश भट्ट, याम क्षेत्री, विमल अधिकारी, महेन्द्र गौतम, दीपक गरौजा मगर, सागर गुरुङ, विक्रम थापा र युवराज मगर निर्वाचित भए ।